Eurasia & CIS oche | Eindhoven na Amsterdam | Law & More B.V.
Mpaghara Pụrụ Iche » Eurasia & CIS oche
Law & More nwekwara ihe omuma banyere ahia Eurasia na echiche nke mba di iche n’etiti Eurasia. Eurasia bụ okwu maka mpaghara ala mejupụtara Europe na Eshia. Anyị enyerela ọtụtụ ndị ahịa si mpaghara Eurasia aka. Ndị ahịa a na - esite na Russia na CIS. Anyị na-ejikọta ihe ọmụma nke ahịa ndị a na anyị nka banyere ikike Dutch na nke mba dị iche iche. Site na ngwakọta a pụrụ iche anyị nwere ike ịnye ndị ahịa Eurasia na ndị ọ bụla ozi zuru oke.
YOU chọrọ enyemaka na EURASIA & CIS DESK?
Azụmaahịa na ndị mmadụ na-esite Russia, Ukraine na CIS na-arụsi ọrụ ike na Netherlands nwere ike ịdabere na enyemaka anyị nwere ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara ego na usoro gbasara ego. Anyị nwere nka iji nye ndụmọdụ banyere jikọtara ọnụ na nnweta, azụmahịa azụmaahịa na usoro nhazi nke azụmaahịa.
Ọ bụrụ n’inwe ebumnuche ịrụ ọrụ n'ahịa Dutch - ma ọ bụ Benelux anyị nwere ike ịnye gị enyemaka iwu n'otu aka ahụ. Law & More nwere ike ịkwado gị mgbe ị na-eme ọtụtụ nkwekọrịta ma ọ bụ nwee ike ikpebi ntọala ụlọ ọrụ kacha adabara gị mma. Site na akụkụ niile na usoro nke ịmalite azụmahịa na Netherlands ị nwere ike ịdabere na enyemaka iwu Law & More.